Nicolas iyo wafti uu hogaaminayo oo Hargeysa imid – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Nicolas iyo wafti uu hogaaminayo oo Hargeysa imid
Safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya, Amb. Nicolas Berlanga iyo wafti uu hogaaminayo ayaa maanta soo gaadhay magaalada Hargeysa ee caasimada Somaliland.
Safiirka iyo Wafdigiisa oo ka kooban Beesha Caalamka ayaa kulamo la qaadan doona Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi iyo Hogaamiyeyaasha xisbiyada Mucaaridka ah.
Waftigan ayaa waxay sare u qaadi doonaan cadaadiska xoogan ee Madaxweyne Biixi lagu saarayo in uu aqbalo qabashada doorashooyinka iyo sidii uu uga laaban lahaa qorshaha uu dhawaan shaaciyay ee dib u furista ururada siyaasada.
Ujeedka waftigan ayaa la xidhiidha sidii ay Madaxweynaha Somaliland ugu qancin lahaayen in uu ka laabto qorshaha uu ku rabo in uu dib u furo ururada Siyaasada iyo arrinta Komishanka cusub oo iyadana murugsan.
Khilaafka xisbiyada mucaaridka iyo Xukuumada uu hogaamiyo Madaxweyne Biixi ayaa sii xoogeystay kadib markii madaxweynuhu uu dhawaan shaaciyey in uu dib u furayo ururada siyaasada, midaasi oo ku sheegay in uu xal u noqonayo khilaafka hadheeyay doorashooyinka
Wixi warar ah ee soo kordha halkan kala soco.
Galmudug oo soo saartay War-saxaafadeed ka dhan ah DFS (Akhriso Sababata)